DHEGEYSO-Isbahaysiga NATO iyo Puntland oo kawada hadlay ammaanka badda. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Isbahaysiga NATO iyo Puntland oo kawada hadlay ammaanka badda.
Nofeembar 19, 2016 9:23 g 0
Boosaaso, Nov 20 2016-Saraakiil sarsare oo kasocda ciidamada caalamiga ah ee kusugan xeebaah Soomaaliya, gaar ahaan kuwa isbahaysiga NATO ayaa kulan kula qaatay dekedda Boosaaso mas’uuliyiin kasocda dowladda Puntland.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda Puntland Siciid Maxamed Raage, oo waftiga mas’uuliyiintii lakulmay kamid ahaa ayaa sheegay inay kawada hadleen sidii labada dhinac isaga kaashan lahaayeen ammaanka badda.
DHEGEYSO-Taliyaha ciidanka difaaca Puntland oo kahadlay ciidamo tababar usoo dhammaaday.
DHEGEYSO-Beelo ku dagaalamay Caabud-waaq oo heshiis hordhac ah gaarey.